ရီယိုဒီဂျနေးရိုး - I LOVE RIO DE JANEIRO - တွေကတော့
ပူနွေးသောရာသီဥတုနှင့်ပါတီများအတွက် Cariocas '' predilection ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ညအချိန်ရွှင်လန်းများအတွက်အများဆုံးထူးခြားတည်ဆောက်ခြင်းငှါကြီးသောအရပ်တစ်ခုရာ၌ခန့်ထားပြီ။
ငါမွို့၏တက်ကြွခရိုင်မှတဆင့်ရီယိုလေတိုက်နှုန်း LOVE ၎င်း၏တောင်ကုန်းကျော်ဝင်သောနှင့်စာဖတ်သူများကိုအများဆုံးစိတ်ဝင်စားဖို့ညအချိန် Recreational အပေါ်သတင်းအချက်အလက်ရောက်စေဖို့အရုဏ်မှမိုဃ်းမလင်းမှီကနေသူ့ရဲ့အရက်ဆိုင်ထဲသို့ဝင်။ စနူကာအရက်ဆိုင်များ, ကျောက်လုံးကြီးကလပ်အသင်း, Samba ညဉ့, လမ်းစစ်ရေးပြ, ပါတီများနှင့်ပွဲတော်ခြစ်ခြစ်အရှိဆုံး, ခေတ်မီဆန်းပြားထူးခြားဆန်းပြားနှင့် buzzing အရက်ဆိုင်အတူတူးဖော်တွေ့ရှိခဲ့ကြသည် - အစားအစာ, အဖျော်ယမကာ, ဂီတနှင့်ဖောက်သည်။ ငါရီယိုဧည့်သည်များနှင့်နေထိုင်သူများမြို့တော်ရဲ့, ရွေးချယ်စရာများပြားရိုင်းနှင့်အံ့ဩဘွယ်သောမူထူးခြားတဲ့ညအချိန်သောက်ပွဲခံအလွန်အများဆုံးလုပ်ကူညီပေးသည် LOVE ။
BOHEMIAN နှင့် CHIQUE, မွဲတမူထူးခြားတဲ့
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အတွက်တွေကတော့ရပ်ကွက်နှင့်မြို့သှားရောကျနထေိုကြောင်းဂီတစည်းချက်၏ဒါဇင်ကဲ့သို့ကွဲပြားခြားနားစေနိုင်ပါတယ်။ အားလုံးအရသာ, နောက်ခံအရှေ့တိုင်း၎င်း၏သိုးခြံကလူသို့ကြိုဆို - ရီယိုရဲ့တွေကတော့လုံးလုံးထူးခြားလက်ခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတက်ကြွဂီတ, အရောင်, အရောင်တောက်, ကလေးဆန်သောနှင့်အာရုံငါးပါးတစ်ရောင်စဉ်နှင့်ပြည့်စုံသည်။
ရုပ်ရှင်ရုံများစွာပြဇာတ်, ဖတ်ကြား, ဘဲလေးနှင့်အစဉ်အဆက်-ပြောင်းလဲနေတဲ့ရောနှောသို့မဟုတ်ဖျော်ဖြေအနုပညာနှင့်အတူရောနှောဧည့်သည်များနှင့်နေထိုင်သူများဖျော်ဖြေနေစဉ် Carioca တွေကတော့ထိုကဲ့သို့သော Samba နှင့် Bossa Nova အဖြစ်စည်းချက်၏အကောင်းဆုံးပူဇော်သက္ကာဘို့သေးငယ်ထူထောင်မှုမှခေတ်သစ်ဂီတကစားခြင်းကြီးမားတဲ့ကလပ်ကနေအထိချဲ့ ။
တစ်ပတ်တစ်လျှောက်လုံးအသက်ရှင်သောဂီတ, Pre-မှတျတမျးတငျထားသနှင့် DJ ရဲ့ရရှိနိုင်တဲ့နေရာများစွာမှာမတူညီကြအစီအစဉ်များနှင့်အတူအတူ - Ipanema နှင့် Leblon ၏ကမ္ဘာကျော်ခရိုင်အိမ်ပြန် chique နှင့်သန့်စင်ပြီးအရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်နှင့်ကလပ်အသင်းအမျိုးမျိုးမှဖြစ်ကြသည်။
Lapa ၏ bohemian ခရိုင်ယခုအသက်ရှင်သော Samba ဂီတ, အသေးစားအလွတ်သဘောအရက်ဆိုင်များနှင့် kiosk, ကျပန်းအချိုရည်များနှင့်လမ်းပေါ်အဆိုတော်များ၏ချမ်းသာကြွယ်တစ်ဦးအလွန်သွက်မြင်ကွင်းတစ်ခုဘို့အသွားဖို့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဂီတစတိုင်များ၏ပုခက်, ရီယိုရဲ့ favelas လောကီနိုင်ငံအရပ်ရပ်ရှိသမျှကျော်ကနေဧည့်သည်များနှင့်ဂီတချစ်သူများကိုဆွဲဆောင်စဉ်အဆက်ပိုကြီးပါတီများကချထား, Funk ဂီတပွဲတော်များနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲအတွက်အဓိကပြဇာတ်ရုံဖြစ်လာကြပါပြီ။
အဆိုပါပွဲတော်နေ့ပှဲရှေ့လအတွက်, Samba ဟာယပူဇော်သက္ကာခြစ်ခြစ်နှင့်အသေးစားအရက်ဆိုင်, ကျော်ကြားထူထောင်မှုနှင့်အများပြည်သူရင်ပြင်၌ဖြစ်ပျက်တိုက်ရိုက်ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်အတူ, မြို့သားအပေါင်းတို့ရပ်ကွက်အနှံ့အဓိကဖြစ်လာသည်။
ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့ရဲ့ပူနွေးသောရာသီဥတုကိုနောက်ထပ်တစ်နှစ်တစ်လျှောက်လုံးအမှန်တကယ်လူမှုရေးနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်တွေကတော့ဖှယျ, တစ်နေ့တာအတွင်းနှင့်ညဉ့်အချိန်တွင်နှစ်ဦးစလုံးပြင်ပတွင်လှုပ်ရှားမှုများစေပါတယ်။
ပြီးနောက်-မှောင်မိုက်သောထိုကလေးငယ်သည်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အတွက်, အနုပညာရှင်များမကြာခဏမိမိတို့အခွက်တဆယ်ကြွယ်ဝပြည့်စုံရှာပါ။ အမှန်စင်စစ် quintessential နှင့် Carioca ဂီတကျင်းပအဓိကအား, jazz, Bossa Nova, Tropicalia, Samba နှင့် Funk Carioca အပါအဝင်ညဉ့်မှောင်မိုက်အရိပ်ထဲမှာမွေးဖွားတီထွင်ခဲ့သည်။
မြို့သူမြို့သားများ၏သမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးကိုတွေကတော့တစ်ထူးခြား Carioca လမ်းအတွက်ဖော်စပ်နှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲဒေသခံယဉ်ကျေးမှုနှင့်ကမ္ဘာကြီးခေတ်ရေစီးကြောင်းအရသိရသည်လာခဲ့ပါတယ်။
1822 ခုနှစ်တွင်တော်ဝင်မိသားစုရောက်ရှိလာပေါ်တူဂီနှင့်ဥရောပ Ballroom ဖက်ရှင်တွေနှင့်အညီရီယိုရဲ့ညအချိန် Recreational တရားဝငျမှတျပုံတငျ။ ပွဲတော်များ၏သေံနှင့်သဘာဝတရားရုံးကသတ်မှတ်ကြပြီးပစ်ချသောပါတီများနှင့်ဘောလုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ 1889 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦး Illustrious တော်ဝင်ဘောလုံးကိုပွဲ, ကခုန်ခြင်းနှင့်စိတ်ကူးယဉ်နေတဲ့ heady ကော့တေးနှင့်အတူ 4000 ကျော်ဧည့်သည်များ entertaining, Ilha ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်နှင့်ဧည့်သည်များမှမသိလိုက်ဘူးကိုခမ်းနားထည်ဝါစွာပါတီတော်ဝင်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးအထိမ်းအမှတ်နှင့်လူဦးရေရဲ့ Recreational အတွက်အဆင့်သစ်အတွက်ဆောငျကွဉျးပေးလိမ့်မယ်။
19 ရာစုညအချိန်ယဉ်ကျေးမှု၏အဆုံးပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်ကလွှမ်းမိုးခဲ့သည်ဆီသို့ဦးတည် "boemia ။ " 1909 ခုနှစ်တွင် 1891. အတွက်ထိုကဲ့သို့သော Moulin Rouge အဖြစ်ဖန်ဆင်းခဲ့ကြပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်-style ကိုရုပ်ရှင်ရုံတစ်အရေအတွက် Teatro စည်ပင်သာယာ (စည်ပင်သာယာပြဇာတ်) ယနေ့တိုင်ရပ်တည်ပေးသော, မြို့ထဲတွင်အများဆုံးဒီကဗျာနှင့် Baroque အဆောက်အဦးများထဲကတစ်ခုဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားထူထောင်မှုသည်ပြဇာတ်ရုံသို့, ဆပ်ကပ်, ဖျော်ဖြေပွဲများနှင့်ဘောလုံး၏မတူညီသည့်ပရိုဂရမ်သို့ပွေးလေ၏။
မွို့တျောတှငျအခြို့သောဒီဂရီကိုဥရောပကြီးစိုးဖို့ကန့်သတ်ဖို့, ဥပဒေနောက်ထပ်ဒေသခံတစ်ဦးတေးဂီတနှင့်ညအချိန်ယဉ်ကျေးမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုနှိုးဆွခြင်းနှင့်ဒီနေ့ရဲ့အထင်ကရ Carioca အတွက်ရရှိလာတဲ့, ဥရောပအမည်များကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်ယဉ်ကျေးမှုအအိမ်များနှင့်အထင်ကရအဆောက်အဘရာဇီးပေးအပ်ခြင်းခံရကြောင်း decreeing, 1901 ခုနှစ်တွင်အတည်ပြုပြဌာန်းခဲ့သည် တွေကတော့ဒဿန။
Chopp (ဘီယာ) ထူထောင်မှုဿုံအပူပိုင်းရာသီဥတုကိုကိုက်ညီသည့်ပြင်ပတွင်ညအချိန်ယဉ်ကျေးမှု၌ရာစုနှစ် Usher ၏အလှည့်မှာပေါ်ထွက်လာဖို့စတင်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မကြာခဏအဆိုပါအသိုင်းအဝိုင်းနေရာများအဖြစ်ယခင်ကသီးသန့်အထီး domains များခဲ့ပြီးသောရင်ပြင်, ရုပ်ရှင်ရုံများနှင့်ဖျော်ဖြေပွဲခန်းမမှစတင်ခဲ့သည်။ ယခင်ကနေ့ခင်းဘက်အလှပြင်ဆိုင်လည်ပတ်မှုများဘက်တွင်ခဲ့သောပရော, တစ်ဦးထက်ပိုအပူအပင်ကင်းပြီးညအချိန်သဘောသဘာဝအပေါ်ယူမှစတင်ခဲ့သည်။
အာဖရိကန်နွယ်ဖွား၏နိုင်ငံသားတွေ Samba နှင့်ပွဲတော်ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူအချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ဘရာဇီးဂီတမှာမိမိတို့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုများနှင့်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်တစ်ဦးသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုသို့ရရှိလာတဲ့, လူကြိုက်များနေရာများသို့တက်ရောက်ရန်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ 1920 ခုနှစ်တွင် Jazz, Charleston နှင့် Samba ခုန်ရီယို, ကြေညာရန်, Olavo Bilac ကာလအချိန်တစ်ကျော်ကြားတဲ့သတင်းစာဆရာဦးဆောင်မြို့ရဲ့ကလပ်အသင်းများနှင့်အရက်ဆိုင်များပြည့်ဝ "ကခုန်မြို့တော်ကို။ "
Lapa cabarets, အရက်ဆိုင်များနှင့်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံနှင့်အတူတှေအမြားကွီး, 1920 တွင်မြို့တော်ရဲ့ bohemian ဗဟိုအဖြစ်ကိုယ်တိုင်ကသန့်ရှင်းစေ။ ဒါဟာသူ့ရဲ့ပြင်သစ်ဘိုးဘေးတို့ကဲ့သို့ဒေသတွင်းမှာအတူတူအနုပညာရှင်တွေ, ပညာတတ်, များသည်မင်းမျိုးအနွယ်ဝင်, နိုင်ငံရေးသမားများနှင့်အသက်ရှည်သမျှလူတန်းစားပေါင်းစုံမှလူအမျိုးမျိုးဆောင် ခဲ့. , ယင်း၏ပြင်သစ်နိုင်ငံတွင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမှ allusion အတွက်အပူပိုင်း Montmartre အဖြစ်လူသိများခဲ့တယ်။ ဒါဟာ, Classical သံစုံတီးဝိုင်း, Jazz, စန္ဒရားနှင့် Samba အပါအဝင်မြင့်မားတဲ့နာမည်ကျော်ရပ်ကွက်အတွင်း, တေးသီချင်းတွေတစ်ကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်နေရာဖြစ်သည်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပေးခြင်း, ဉာဏ milieu နှင့်မဲမှောင် ပို. လျှို့ဝှက်မရဏ - ထိုအချိန်ကာလ၏အဆိုတော်များနှင့်စာရေးဆရာများနှစ်ဦးပူးတွဲတည်ဆဲ Lapas ၏စကားပြောခဲ့သည်။
ရာစုနှစ်ရဲ့အလယ်ဆီသို့ဦးတည်Cinelândiaဖွဲ့စည်းရေးနှင့်အတူ, အခြားကျယ်ပြန့်သောမြို့ပြပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုနှင့်အတူ Lapa အဓိကအားဖြင့်ပညာတတ်များနှင့်အနုပညာရှင်များအားဖြင့်စွန့်ပစ်ခံခဲ့ရနှင့် Lapa restore ပြန်, နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်များစွာ၏ခရိုင် redevelopment နှင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှီတိုငျအောငျ, ၎င်း၏ပိုပြီးအဖျက်သမား counterparts တွေကိုကျန်ရစ် သူ့ရဲ့မူရင်းကျက်သရေနှင့်ဘုန်းအသရေ။
1934 ခုနှစ်တွင် "ကာစီနို da Urca" လောင်းကစားဝိုင်း, ပြဇာတ်ရုံ, cabaret, ဂီတနှင့်အကအခုန်၏ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု Fusion ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, တောင်အမေရိကအတွက်အကြီးမားဆုံး performance ကိုပြဇာတ်ရုံဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဆင်သင့်ကြမ်းတမ်း-and အဆစ်မှခေတ်မီဆန်းပြားထူထောင်မှုကနေကာစီနိုလောင်းကစားရုံ၏ 1930 ရာပေါင်းများစွာအတွက်လောင်းကစားဝိုင်း၏ Re-တရားဝင်အပြီးတွင်လူဦးရေရဲ့အရသာနှင့်ဝင်ငွေထားရှိရန်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ 1946 ခုနှစ်တွင်လောင်းကစားဝိုင်း ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့နှင့်ဘရာဇီးမှာလောင်းကစားရုံယဉ်ကျေးမှုကိုတစ်ဦးနီးကပ် drawing, နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းမှတားမြစ်ထားသောခဲ့သည်။
1990 ခုနှစ် Lapa က၎င်း၏အတန်ငယ်လွန်ကျူးခြင်းပုံရိပ်ကိုပြောင်းလဲနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ effervescence အသစ်တစ်ခုလှိုင်းလုံးပေးကမ်း, မြို့ပြပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုတစ်စီးရီးရှောက်သွားလေ၏။ ခရိုင်ထို့ကြောင့်ညဉ့်အခါမြို့သူမြို့သားယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာအုတ်မြစ်အဖြစ်ပြန်လည်ထွန်းသစ်စ, အပြည့်အဝစက်ဝိုင်းသွားပြီ။
သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့တွင်, အထူးသဖြင့်နာမည်ကြီး Lapa ရစေီးရလောမွောငျး arcs သဖြင့်ကားလမ်း၏အဓိကလမ်းပိုင်း, ထိုကဲ့သို့သော barbecued အမဲသားနှင့် pastries အဖြစ်ကော့တေး, ဘီယာနှင့်အရသာလမ်းပေါ်ကအစားအစာ, ရောင်းချခြင်းစျေးသည်များနှင့်အတူဘဝကိုထံသို့မရောက်ရ။ သိပ်ပြီးနှင့်အဆိုတော်များအုပ်စုများသေးငယ်တဲ့စက်ဝိုင်းဖွဲ့စည်းရန်နှင့် enraptured ပရိသတ်တွေဖို့လုပ်ဆောင်နေချိန်မှာတစ်ဦးကမတူကွဲပြားသောမြို့တော်ရဲ့လူဦးရေရဲ့ Cross-အပိုင်းများနှင့်ဧည့်သည်များ, အတက်ကြွလေထုထဲတွင်ရောနှော။
ကလပ်အသင်းတစ်ကျယ်ပြန့်တွေဖြစ်တဲ့ Samba, Forróနှင့် Funk အဖြစ်ရိုးရာဂီတကစားခြင်း, ခရိုင်၏လမ်းများတန်းစီ။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းယခုအရှိဆုံးဂုဏ်ပြုဘရာဇီးနှင့်နိုင်ငံတကာအနုပညာရှင်များအချို့ကိုမှန်မှန်လုပ်ဆောင်ဘယ်မှာအလွန်လေးစားခံရသောဂီတပြဇာတ်ရုံဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ရဲ့ညအချိန်ယဉ်ကျေးမှု၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသာဟုခေါ်တွင်ဒေသခံအရက်ဆိုင်များမှာ "boutequims ။ " မြို့သူမြို့သား၏အစောပိုင်းဘီယာအိမ်၏အဖြေအဆက်, ဒီအရက်ဆိုင်ကျောက်ခင်းရှေ့တွင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားစားပွဲများနဲ့ထိုင်ခုံအပြင်ဘက်သူတို့ကို Open-လေကြောင်းရန်နွေးထွေးမှုချေးငှားနေစဉ်, သူတို့ရဲ့အိမ်တွေခံစားဖို့ကထပ်ပြောသည်ထားတဲ့ရိုးရှင်းပြီး unembellished အလှဆင်ရှိသည်လေ့ရှိပါတယ်။ သူတို့ကတစ်ဦးအသားနဲ့ bean ကိုဇွန်း, pastries, ကော့ဘောလုံး, ဟင်းချိုနှင့်ပုစွန်အပါအဝင်ရိုးရာအဘားတန်းအစားအစာများ, ၏ဌန်အဖြစ်ပိုပြီးရဲနှင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုရောင်းလိုက်သည်။
အရက်ဆိုင်, စားသောက်ဆိုင်နှင့်ဂီတအိမ်များအကြားတစ်ဦးရောနှောပုံမှန်အားဖြင့် Carioca ထူထောင်မှု Copacabana, Ipanema, Leblon နှင့်အနောက်ပိုင်းအတွက်၏အဓိကနည်းလမ်းတစ်လျှောက်ပုံမှန်အားဖြင့် Rio တောင်ပိုင်းဇုန်အတွက်ဖြန့် High-end တည်နေရာများကိုအတူဒေသခံဟင်းလျာများနှင့်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှဖျော်ဖြေပွဲနှစ်ခုလုံးနှင့်အတူဧည့်သည်များကြိုဆိုပါတယ် Barra ကို da Tijuca လျှောက်လုံးဇုန်။ ထို့ပြင်ဒေသတွင်း၌အဆင့်မြင့်ဇိမ်ခံဟိုတယ်အများအပြားမကြာခဏတိုက်ရိုက် DJ ရဲ့အတူ High-end လူအစုအဝေးနှင့်နိုင်ငံတကာဂီတဟာယပူဇော်သက္ကာအတွက်ရည်ရွယ်စိတ်ကူးအရတော့ဒီအရက်ဆိုင်အတူမိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူပါသည်။
Carioca ညအချိန်၏နောက်ထပ်အလယ်ပိုင်းနဲ့ထူးခြားတဲ့ဝိသေသမြို့တော်ရဲ့ Plaza နှင့်ရင်ပြင်သို့ဦးတည်သည်၎င်း၏မြေထုဆွဲအားသည်။ Praçaဆန်းတို့စ Dumont (စိန့် Dumont ရင်ပြင်မှာ) ၏အနီးတစ်ဝိုက်တွင်တည်ရှိသည် Baixo Gávea (အောက်Gávea), ရီယိုအတွက်ခေတ်မှီအချက်အလက်များ၏စုပေါင်းဖြစ်ပါတယ်။ Cariocas မိတ်ဆွေဟောင်းနှင့်တွေ့ဆုံနှင့်အသစ်, ကိုသောက်သုံးချမ်းအေးဘီယာအောင်နှင့် toasted မြေပဲသို့မဟုတ် pastries အပေါ် snacking, အရက်ဆိုင်များနှင့်စျေးသည်များအကြား flit ။ Laranjeiras နှင့် Flamengo ၏ခရိုင်အကြားအလတ်စားဂီတ, ကခုန်, ရယ်မောခြင်းနဲ့စကားလက်ဆုံနှင့်အတူညတိုင်းဘဝကိုမှကြွလာတော်မူသောPraçaဆောပိုလိုဆာဗေးဒေါဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဂီတသမားစည်းချက်တစ်ခုကျယ်ပြန့်စစ်ခင်းကျင်းအများစုကအထူးသ Samba, Chorinho, Jazz နဲ့ acoustic ဂစ်တာတီးခတ်ဖို့စုရုံးဘယ်မှာရီယိုရဲ့ပြင်ပတွင်ညဥ့်ယဉ်ကျေးမှု, ၏စိတ်အေးလက်အေးကျက်သရေ epitomizes ။ ဤရွေ့ကားဖျော်ဖြေပွဲသည့်အခါစိတ်ဓါတ်များသပိတ်ကခုန်သို့ထွက်ချိုးဖျက်ဖို့လေ့အဘယ်သူသည်ရွှင်လန်းခြင်းနှင့် enraptured ပရိသတ်တွေဖြင့်ပျော်မွေ့နေကြသည်။
, အရောင်စုံသွက်အပေါင်းတို့နှင့်တကွ, ရန်ကြိုဆိုပွဲညဉ့်အခါ ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့လုံးကိုဘတ်ဂျက်အဘို့, ဖျော်ဖြေမှု options တွေကိုအမှန်တကယ်ကျယ်ပြန့်ခြင်းနှင့်မတူကွဲပြားသောအကွာအဝေးကမ်းလှမ်းကြောင့်စွမ်းအင်နှင့် vibrancy ဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်အံ့သြဖွယ်၏အဖြစ်ကြွယ်ဝသောအရသာရှိတယ်။
ထို chique Ipanema ထံမှ bohemian Lapa မှ: ရီယိုဒီဂျနေးရိုး မြို့အသီးအသီးအနီးသို့ရောက်ကြဘဝက sub-ယဉ်ကျေးမှုကို ond ထူးခြားတဲ့စတိုင်ပေးအပ်ခြင်း, 160 ကျော်ခရိုင်မှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ဂန္ထဝင်ကနေအမှန်တကယ်စစ်မှန်ရန် - ငါရီယိုအကောင်းဆုံးမြို့တော်ရဲ့တွေကတော့တွေ့ကြုံခံစားဖို့ဘယ်လိုပေါ်ကျယ်ပြန့်အမြင်ကိုပူဇော်ဖို့သောအရပ်နှင့်ဖြစ်ရပ်များတွေ့ရှိ LOVE ။